Global Voices teny Malagasy » Sambany teo amin’ny tantaran’i Brezila no nisy vehivavy indizeny tafiditra tao amin’ny Kongresy nasionaly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jona 2019 5:30 GMT 1	 · Mpanoratra Fernanda Canofre Nandika (es) i Lourdes Sada, Annick Battesti, Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fifidianana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teratany, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Joênia, ilay vehivavy indizeny voalohany manampahaizana amin’ny lalàna ao Brezila. Ampahan’ny sary tao amin’ny lahatsarin’ny United Nations Web TV
Tamin’ny taona 1997, i Joênia Wapichana no lasa vehivavy indizeny voalohany Breziliana nahazo mari-pahaizana lisansa amin’ny taranja lalàna . Iraika ambin’ny folo taona taty aoriana, izy no vehivavy indizeny voalohany nitondra ny raharaha iray teo anoloan’ny Fitsarana Tampony . Ary tamin’ny volana Oktobra 2018, dia nisongadina indray izy tamin’ny maha-vehivavy indizeny voalohany azy voafidy tao amin’ny Kongresy nasionaly .
Niaraka tamin’ny isam-bato mitotaly 8.491  no nahazoany ny iray tamin’ireo seza valo natokana ho an’ny fanjakany ao Roraima. Mario Juruna [fr]  no hany solombavambahoaka indizeny nahazo toerana talohany tao amin’ny Kongresy Breziliana, vazimba Xavante, voafidy tamin’ny taona 1983 izany.
Teraka tao amin’ny vondrom-poko Wapichana, nifindra tany Boa Vista, renivohitry ny fanjakana Roraima i Joênia tamin’ny faha valo taonany. Izy no nandoa ny vola nianarany taranja lalàna raha sady niasa tao amin’ny birao momba ny fitantanana iray, ary nambarany tao amin’ny antsafa iray natao vao haingana  fa nahazo ny mari-pahaizany herintaona mialoha ny fotoana tokony ahazoana izany izy, ary fahadimy tamin’ireo mpiray taranja taminy izay ankizy avy amin’ny antokon’olom-bitsy mpanankarena tao Roraima :
Tamin’ny volana Desambra 2018, amin’ny maha-solombavambahoaka voafidy azy, dia nahazo loka momba ny zon’olombelona avy amin’ny ONU  i Joênia noho ny asany niavaka ho fanandratana ny zon’ireo vahoaka tompotany. Io fankasitrahana io ihany koa no natolotra an’i Nelson Mandela sy Malala tamin’ny fotoan’androny.
Joênia Wapichana miaro ny olan’ny indizeny tao amin’ny Fitsarana Tampony. Pikantsary avy amin’ny lahatsary tao amin’ny YouTube/Fitsarana Tampony ao Brezila.
Eo amin'ny fihaonan-dalana
Niditra tao amin’ny tantara i Joênia tamin’ny taona 2008 rehefa niaro ny olan’ireo indizeny miisa dimy izy momba ny fanambarana ofisialy mikasika ny tanin’izy ireo  ho Tanin’ny Indizeny , fananana izay manome ireo vahoaka indizeny ny zo tsy azo esorina amin’izy ireo momba ireo tanin’ny razambeny.
Nanome rariny ny vahoaka indizeny ny fitsarana, izay nanjary tompon’ny tanin’ny indizeny mivelatra indrindra any Brezila, dia ny tanin’ny Raposa Serra do Sol , any amin’ny fanjakan’i Roraima.
Nanivaiva mpikatroka indizeny iray nanatrika ny fitsarana azon'ny rehetra atrehina tao amin’ny Efitry ny solombavambahoaka i Jair Bolsonaro izay mpikambana tao amin’ny Kongresy tamin’izany fotoana izany, momba ny faritra mampisaraka ny tany Raposa Serra do Sol . Tokony hivoaka izy ireo handeha hiraoka ahitra hiarovana ny fiaviany; hoy izy tamin’io fotoana io.
Fotoana fohy taorian’ny nandreseny tamin’ny fifidianana tamin’ny taona 2018, noresahan’i  Bolsonaro indray ny momba an’i Raposa Serra do Sol ho ohatra amin’ny tanin’ny indizeny izay tokony hotrandrahana ara-toekarena. Hoy izy tamin’ireo mpanao gazety :
Io no faritra manankarena indrindra [ankibon'ny tany] manerana izao tontolo izao. Tokony ho trandrahintsika amin’ny fomba ara-dalàna izany. Ary omentsika fanonerana ireo Indiana ary ampiatiantsika ho ao amin’ny fiarahamonina izy ireo
Folo taona lasa izay, niaraka tamin’ny endrika nolokoina tsipika mena nentim-paharazana  avy amin’ny foko misy azy, nampifangaro ny teny Portiogey sy ny fitenindrazany i Joênia ho fampatsiahivana ireo mpitsara fa telo tapitrisa dolara Amerikana eo ho eo no nivezivezy tany amin’ireo tany ireo fa saingy tsy nisy fiantraikany tamin’ny toekarena Breziliana akory.
Sary: The Institute for Inclusive Security, CC 2.0
Ilay mpanohitra manana ny heriny
Nilaza tamin’ireo mpanao gazety marobe avy amin’ny gazety nasionaly mivoaka isan’andro Folha de São Paulo  i Joênia, raha izy niomana handray ny toerana amin’ny maha solombavambahoaka mpanohitra ny governemantan’i Bolsonaro azy hoe :
Nahoana izy [Bolsonaro] no manenjika mafy ny vahoaka tompotany? Nahoana no be fankahalana ary nahoana no mila mitodika any aoriana ?
Manana ny fizahan-tany, ny fitsaboana nentim-paharazana, ny rindravoary goavana any Amazonia isika. Tokony atsahatra ny filazana fa sakana amin’ny fampandrosoana izahay, ka manimba ny A
Mila hetsika haingana
Nanomboka ny asany tamin’ny volana Febroary 2019 ny Kongresy ao Brezila, ary nanomboka ny fe-potoana hiasany amin’ny maha-mpitarika ny antoko  azy Rede Sustentabilidade ( Tambajotra maharitra) i Joênia tao amin’ny Efitry ny solombavambahoaka, ao amin’ny antenimieram-pirenena federaly. Natsangan’ny Minisitry ny Tontolo iainana teo aloha Marina Silva  ny antoko Rede izay na dia tsy nandresy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena in-telo nifanesy aza izy, dia fanta-daza teo anivon‘ny fikatrohana ara-tontolo iainana tany Brezila.
Taorian’ny voinan’ny tohodrano tao Brumadinho , izay nahafatesana olona miisa 160 ary namotika ny zava-boary  rehetra tao amin’ny reniranon’i Paraopeba dia nanolotra ny volavolan-dalànany voalohany  i Joênia, izay manasazy mafy kokoa ireo heloka bevava atao amin’ny tontolo iainana izay miantraika mafy eo amin’ny zavaboary, ny aina sy ny fahasalaman’ny olombelona, ary niantso izany ho ‘’heloka feno fankahalana, sy karazana fandikan-dalàna izay miteraka sazy faran’izay henjana indrindra.
Mialoha ny andro handraisany ny asany, nilaza tamin’ny gazety tao an-toerana avy ao Roraima Folha de Boa Vista  ilay solombavambahoaka fa miompana amin’ny tsy fahampian’ny fanajan’ny orinasa tsy miankina ny tontolo iainana ny volavolandalànany :
Mampanahy anay ny politikan’ity governemanta ity: manozongozona ny rafitra izay natsangana mba hiarovana ny tontolo iainana salama araka ny voalazan’ny Lalam-panorenana izy ireo, ary ny fiantraikan’izany ara-tsosialy. Ohatra ireo lisansa ara-tontolo iainana izay mampihena ny andraikitry ny orinasa sy ny fampihenana ny fahefan'ny Fanjakana eo amin'ny fanaraha-maso.
Nandritra ny antsafa nifanaovana tamin’ny BBC , nilaza i Joênia fa ny famaritana ny tanin’ireo indizeny no laharam-pahamehany ao amin’ny Kongresy :
Raha misy olona antsasaky ny folo manan-tany be velarana etsy andaniny, ary izahay kosa fokonolona vitsy an’isa iray manontolo etsy izay mahatsapa ho isoloako tena. Ireo no vahoaka mila fisoloantena. Nataon’ny olona izay tsy nihevitra afatsy ny tombontsoany manokana ny politika taloha. Hitondra soatoavina iombonana aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/19/139833/
 nahazo mari-pahaizana lisansa amin’ny taranja lalàna: https://cimi.org.br/2018/10/joenia-wapichana-a-primeira-mulher-indigena-deputada-federal-em-190-anos-de-parlamento/
 nitondra ny raharaha iray teo anoloan’ny Fitsarana Tampony: http://www.stf.jus.br/PORTAL/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95042
 maha-vehivavy indizeny voalohany azy voafidy tao amin’ny Kongresy nasionaly: https://oglobo.globo.com/brasil/joenia-wapichana-rede-eleita-primeira-mulher-indigena-para-cargo-na-camara-dos-deputados-23138497
 isam-bato mitotaly 8.491: https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rr/deputado-federal/joenia-wapichana-1818/
 Mario Juruna [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mário_Juruna
 antsafa iray natao vao haingana: https://www.youtube.com/watch?v=LZPNB4BLNQE
 loka momba ny zon’olombelona avy amin’ny ONU: https://videos.un.org/en/2019/01/29/joenia-indigenous-rights-defender-in-brazil/
 tanin’izy ireo: https://es.wikipedia.org/wiki/Raposa_Serra_do_Sol
 Tanin’ny Indizeny: https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_indig%C3%A8ne
 ny endrika nolokoina tsipika mena nentim-paharazana: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/08/politica/1539035477_870212.html
 maha-mpitarika ny antoko: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/572135-UNICA-REPRESENTANTE-DA-REDE,-JOENIA-WAPICHANA-DEFENDE-PAUTAS-AMBIENTAIS.html
 Marina Silva: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marina_Silva
 voinan’ny tohodrano tao Brumadinho: https://fr.globalvoices.org/2019/01/31/232632/
 namotika ny zava-boary: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/nao-existe-mais-vida-no-rio-paraopeba-afirma-secretario-de-brumadinho.shtml
 nanolotra ny volavolan-dalànany voalohany: https://www.facebook.com/Dep.Joeniawapichana/photos/a.278004339463930/346374435960253/?type=3